Northstar Qiimaynta Akhriska iyo Qoraalka Dijital ah
Tus shaqo bixiyaasha inaad leedahay xirfadaha ay raadinayaan! Northstar waxay bixisaa ilaa iyo 14 shahaado oo aad ku qori kartid resumeygaaga ama astaantaada dhijitaalka ah si aad u caddeyso inaad taqaanno sida loo isticmaalo kombuyuutarrada iyo barnaamijyada.
Tiknoolajiyadda hadda waxaa looga baahan yahay wax kasta oo ka yimaada shaqo raadis, shaqo dalbasho, iyo xitaa ka shaqeynta shaqo. Loo shaqeeyayaashu waxay rabaan inay shaqaaleeyaan musharrixiin horeyba u lahaa xirfadda ay raadinayaan.
Call (816) 701-3606
Qiimeynta Northstar Digital Literacy Assessments waxay udhaxeysa 20-45 su'aalood oo kaaga baahan inaad muujiso xirfadahaaga. Halkii aad ka dooran lahayd dhowr ama aad ku sharixi lahayd xirfadahaaga farsamada, waxaa lagaa codsanayaa inaad qabato hawlo caadi ah sida "u wareejiso faylka qashinka" ama "furo shabakad internet".
Haddii aad dhaliso 85% ama ka sareeya, waxaad kasbatay shahaado caddaynaysa inaad adigu madax ka tahay heerarka qiimeyntaas ku jira. Haddii aadan dhalin 85%, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno inaad barato, ku tababbarto, oo aad xirfadaha barato!
Si aad u hesho shahaadadaada, waa inaad ku qaadataa qiimeynta iyadoo la kormeerayo tijaabo imtixaan. Hawlwadeennada waxaa laga heli karaa maktabad kasta oo ka mid ah Magaalada Kansas ballan ahaan.
Si aad jadwal ugu sameyso qiimeynta Northstar proctured, buuxi foomkan ama wac 816.701.3606. Waxaan ku guuleysan karnaa imtixaannada tijaabada ah shakhsi ahaan iyo shaqsi ahaanba.